Tsy navela hiditra an’i Koety i Ahmad Mansoor , bilaogera Emirà Arabo Mitambatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Avrily 2019 3:57 GMT
Tsy navela niditra tao Koety i Ahmad Mansoor, bilaogera malaza indrindra any Emirà Arabo Mitambatra izay notazonina nandritra ny volana maromaro tamin'ny taona 2011 niaraka tamin'ireo mpikatroka miisa efatra hafa noho ny famenoana fanangonan-tsonia an-tserasera izay nangataka ny fanavaozana tao amin'ny fireneny. Navotsotra tamin'ny famotsoran-keloka tamin'ny 28 Novambra 2011 ny Emiraty Arabo Mitambatra miisa 5, anisan'izany i Mansoor. Nanaovan'ny mpitandro ny filaminana bemidina ary nofoanana ny valan-dresaka nataon'ny Human Right Watch tany Dubai izay saika hamoahana ny tatitry ny fikambanana momba ny fitotongan'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny fanjakana Hoala manankarena.
Tamin'ny alàlan'ny kaontiny Twitter, no nitateran'i Mansoor ny antsipirian'ity bemidina ity tao amin'ny valan-dresaka nataon'ny HRW ity. Herinandro mahery taorian'izay dia nandeha tany Koety i Mansoor ary nolavina ny fidirany tao an-toerana, izay nahatonga azy ho ilay mpiaro ny zon'olombelona faharoa nolavina fidirana tao Koety tao anatin'ny fotoana fohy nanaraka an'i Kassab Al-Otaibi (@Dr_Kassab) Saodiana mpanohitra mpikatroka monina any amin'ny Fanjakana Britanika. Nitatitra ny zava-nitranga taminy tao amin'ny seranam-piaramanidina i Mansoor tamin'ny alàlan'ny twitter, koa satria nanao fifidianana parlemantera i Koety dia izany no iray amin'ireo antony tsy naharototra loatra ny tranga nahazo ity bilaogera Emiraty Arabo Mitambatra ity.